China Fithem ks-011b waterproof music wireless Bluetooth n'olu nghọta gaminggba Cha Cha ekweisi na-emepụta na suppliers | Kaiwansi
Fithem ks-011b waterproof music wireless Bluetooth n'olu nghọta gaminggba Cha Cha ekweisi
Dị ngwaahịa a bụ warara nke silica gel. Typedị ekweisi a agaghị adị arọ nke ekweisi ahụ mgbe a na-eyi ya n'olu.
1. Thedị ngwaahịa a bụ warara nke silica gel. Typedị ekweisi a agaghị adị arọ nke ekweisi ahụ mgbe a na-eyi ya n'olu.
2. Enwere ike ịhazi ihe eji emepụta ihe dịka ihe ndị ahịa chọrọ. Ngwongwo na ngwungwu ngwungwu mara mma nke ukwuu ma zute ọhụụ ọha na eze.
Azụ ngwugwu m jisiri ike na oji dị ka ndabere, akụkụ ahụ na-acha ọcha, ọcha na oji na-ewu ewu karị, ụdị usoro a na-ewu ewu na-adịkwa ndụ karị. Foto nke ntị ntị dị n'etiti igbe ahụ doro anya na anya, ọ na-egosipụta nke ọma n'ihu ndị mmadụ. .
3. Na-arụ ọrụ mmiri dị mma nke ukwuu. Udiri mmiri adịghị IPx5. Ọ bụ ezie na ọ nweghị ike belata mkpọtụ, ọ nwere ike belata mkpọtụ ahụ. Ntughari na ntị dị ezigbo nso. Nke a na - ebelata ụda dị na mpụga ma na - achọpụta mkpọtụ mkpọtụ anụ ahụ. Ntị nku nke azụ shark na-adịkwa mma Ọ dị mma na ekweisi agaghị ada n'ihi ụfọdụ mmega ahụ n'oge mmega ahụ, na igodo ọrụ ekweisi dịkwa mfe iji rụọ ọrụ. A na-egosikwa ụzọ abụọ nke earplugs. Enwekwara eriri USB na-akwụ ụgwọ, yana akwụkwọ ntuziaka ngwaahịa na akwụkwọ ikike.
Horn dayameta 9MM
Nkwupụta okwu 16Ω
Nzaghachi ugboro ugboro 20Hz-20KHz
Ike batrị 220mAh
Oge ojiji 300hours
Ogologo Bluetooth 10M
Mmiri mmiri IPX5
4. Ojiji nke ekweisi bụ ezigbo enyi na enyi, dịka okwute ntị Bluetooth nkịtị. Mgbe ị jiri ya na nke mbụ, pịa ma jide bọtịnụ ọrụ ahụ ruo mgbe ọkụ na-acha anụnụ anụnụ na-enwu gbaa ọsọ ọsọ na steeti ahụ, ị ​​banyere ọnọdụ pairing, chọta KS-011B a na ngwaọrụ ahụ, ị ​​nwere ike jikọọ ya.
Nke gara aga: Fithem Ks-009SBluetooth na-agba chaa chaa na-enweghị mmiri na ekweisi ụlọ ntụrụndụ
Osote: Ks-008 fithem Waterproof gaminggba Cha Cha wireless Bluetooth Bluetooth na ekweisi ụgbọ mmiri ezi ihe inyeaka maka egwuregwu na oge ntụrụndụ ọrụ
Ks-008 Fithem Waterproof gaminggba Cha Cha wireless blueto ...
Fithem ks-020 Bluetooth wireless earphone onyeisi ...
Ks-012 fithem gaminggba Cha Cha sports wireless ekweisi bl ...